Guddoomiye Cabdi Xaashi “Dalka Shiinaha waxaa uu noo qabtay wax-muuqda oo raad reebaya” – Kalfadhi
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, wasiiro iyo xildhibaanno ayaa shalay magaalada Muqdishu uga qeyb-gallay munaasabad loogu dabaal-degayay aas-aaska xisbiga talada dalka Shiinaha haya ee Jamhuuriyada dadka Shiinaha.
Sanadkii 1949-kii ayaa la aas-aasay xisbiga, waxaana uuna kamid yahay axzaabta ugu waaweyn dalka Shiinaha.
Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Shiinaha uu ka dhaxeeyo xiriir adag oo qota-dheer.
Mashaariicda dowladda Shiinaha ay ka fuliyeen dalka Soomaaliya waxaa kamid ah, dhismaha tiyaatarka Qaranka, Cusbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Banaadir, garoonka kubadda-cagta ee Stadium Mogadishu, dhismaha jidka isku xira Waqooyi iyo koonfur, dhimihii mashruuca faanoole, ayuu yiri guddomiyaha.
Dalka Shiinaha waxaa uu noo qabtay wax-muuqda oo raad reebaya, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa leh xariir xooggan, soo jireen ah oo qota dheer iyo iskaashi salka ku haya danaha labada dowladood iyo labada shacab.
1940-kii ayaa dhidibada loo aasay xiriirka Diplomaasiyadeed ee dowladdaha Shiinaha iyo Soomaaliya.
October 1, 1949 ayaa Shiinuhu noqday jamhuuriyad, waxaana sannad kasta asbuuca ugu horreeya October shiinaha iyo safaaradaha caalamka uu ku leeyahay lagu qabtaa munaasabo lagu weynenayo.